Daawo Xildhibaan Dalxa oo ka digay in la musuq maasuqo gurmadka la geynayo Afgooye | SMC
Home WARARKA MAANTA Daawo Xildhibaan Dalxa oo ka digay in la musuq maasuqo gurmadka la...
Daawo Xildhibaan Dalxa oo ka digay in la musuq maasuqo gurmadka la geynayo Afgooye
Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu ka digay in la musuq maasuqo gargaarka la geynayo degmada Afgooye ee gobolka shabeellada Hoose.
Xildhibaanka ayaa waxaa uu sheegay in walaac xoogan ay ka muujinayaan dhaqaalaha ay dowladda Federaalka Soomaaliya ugu deeqday shacabka saameynta ku yeeshay fatahaada wabiga shabelle uu ka geystay degmada Afgooye.
Sidoo kale Xildhibaan Dalxa ayaa ku baaqay in loo gurmado shacabka ku dhibaateysan degmada Afgooye.
Dhawaan ayay aheyd markii mas’uuliyiinta Degmada Afgooye ay sheegeen in fatahaadaha ku dhuftay magaalada ay barakiciyeen ilaa 6 kun oo qof islamarkaana ay kusii fidiyaan xaafado iyo degaanno cusub.
Previous articleQarax ka dhacay Magaalada Muqdisho & faah faahin laga helay
Next articleDowlada Somalia oo beenisay Warar ay qoreen wargeyso ka soo baxa dalka Kenya